चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा.केशी १७ औं चरणको अनशन बस्दै – Online Annapurna
चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा.केशी १७ औं चरणको अनशन बस्दै
१८ कार्तिक २०७६, सोमबार ०३:४० November 4, 2019 255 Views
कात्तिक १८, काठमाडौं-चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी सोमबारदेखि अनशन बस्ने भएका छन्।
चिकित्सा शिक्षाभित्र देखिएको विकृति अन्त्य गर्न सरकार उदासीन देखिएको भन्दै डा. केसी अनशन बस्न लागेका हुन्। यसअघि उनले आफ्ना माग र यसअघिको अनशनका क्रममा भएका सहमति पूरा गर्नका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम समेत दिएका थिए। अल्टिमेटम दिँदासमेत सरकार उदासीन बनेपछि आफ्नो १७ औं चरणकोअनशन सुरु गर्न लागेका हुन्।
डा. केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार उनी सोमबारदेखि अनशन बस्न लागेका हुन्। चिकित्सा शिक्षाको सुधार हुनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिन उनी १६ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन्। उनले आफ्नो १६ औँ अनशन इलाम पुगेर सुरु गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुन नसक्दा यो क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएको डा. केसीको आरोप छ। शिक्षण अस्पतालबाट सेवानिवृत भएका डा. केसी अनशन बस्ने उपयुक्त ठाउँको खोजीमा लागेको बताइएको छ । उनको मोबाइलसमेत बन्द रहेको छ।